ဖေဖေ့မေတ္တာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဖေဖေ့မေတ္တာ
Posted by mamanoyar on Jul 26, 2012 in Short Story | 17 comments
ညနေ နေဝင်နေပြီမို့ သုံးယောက်သား ယာခင်းထဲမှ ပြန်ဖို့ သုံးယောက်သား ထရပ်လိုက်ကြသည်။ သုံးယောက်ဆိုလို့ အသက် 50 အရွယ် အဖေရယ်၊ အမေရယ်၊ သမီးတစ်ယောက်ရယ်။
အပြန်လမ်းက မိုးချုပ်နေပြီမို့ ခပ်သွက်သွက် လှမ်းသွားနေတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်နားကို ယောက်ကျာင်္းစီးဘီး အအိုလေးတစ်စီး ဖြေညှင်းစွာ ရပ်လိုက်သည်။ ထိုသူမှာ အဖေဆိုသူဖြစ်သည်။ သုံးယောက်မို့ အဖေတစ်ယောက်ထဲ စီးသွားရန် ပြောသော်လည်း အေးအတူ ပူူအမျှုဟုဆိုကာ စက်ဘီးကို မိမိတို့နှင့်အတူ သွင်းသွားခဲ့သည်။ လမ်းတစ်ဝက်အရောက်တွင်တော့ ရွာဘက်ပြန်သောလမ်းတစ်လျှောက် မှာ အဆင်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့် စက်ဘီးစီးသွားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သမီးကို ရှေ့ဘားတန်းမှာ ထိုင်စေပြီး
အမေက နောက်ခုံမှာထိုင်လိုက်သည်။ အဖေက ဘီးကို နင်းပြီး သုံးယောက်သား စီးလာခဲ့ကြသည်။ ရွာအနီးရှိ အဆင်းရှည်ကြီးအရောက်တွင်တော့ စက်ဘီးစီးလာရင်း ဘရိတ်တုန်း ရုတ်တရက် ပြုတ်ကျသွားတော့သည်။ ဘရိတ်ပြုတ်ပြီဆိုတာသိလိုက်ချိန် အမေ့ကို ဆင်းနေခဲ့ရန် အဖေသတိပေးလိုက်ရာ အမေလဲ ရုတ်တရက် ဆင်းနေခဲ့သည်။ အဖေနှင့်သမီးမှာ ပြင်းစွာသော အဟုန်နှင့် လှိမ့်သွားသော ဘီးပေါ်တွင် စိုးရိမ်မှုများစွာနှင့် ပါသွားတော့သည်။ ထိုအချိန် အဖေဖြစ်သူ ဘီးကိုထိန်းနိုင်သမျှ ထိန်းကာ အရှိန်လျှော့စေမည့် အကွေ့လမ်းကို ချိုးကွေ့လိုက်သည် ထိုအခါ ဒုတ်ဆိုသောအသံနှင့်အတူ ကျောက်တုံးတစ်တုုံးကို ဝင်ဆောင့်မိတော့သည်။ ကြောက်အားလန့်အားနှင့် သေပြီကွဟု သမီးဖြစ်သူ ရင်ထဲထင်လိုက်မိစဉ် မိမိရရဆုပ်ကိုင်ထားသော အဖေ့လက်တစ်ဖက်နှင့်အတူ စက်ဘီး ကိုကိုင်ကာ ထောက်ထားသောကြောင့် စက်ဘီးလုံးဝလဲမကျ သွားပဲ မိမိလဲဘာမှမဖြစ် ပဲရှိနေသည်ကို အံအားသင့်မိသည်။ အဖေ့ခြေထောက်တွင်တော့ ဘေးမှဆူးချုံပုတ်ကို သတိမထားနိုင်ပဲ လဲကျမသွားစေရန် အရဲစွန့်ပြီး ထောက်လိုက်သည့် ခြေထောက်မှာ ဆူးခြစ်ရာများနှင့်အတူ သွေးအနည်းငယ်ယိုစီးခဲ့ရသည်။ ခါးလဲနာသွားမည်ထင်သည်။ ထိုအချိန် မိမိနာကျင်မှုကို ဂရုမစိုက်ဘဲ သမီးငယ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ ဟူသည့် ဂရုဏသံနှင့် မေတ္တာတို့ရောစွက်ကာ မေးလာသည့်အသံပိုင်ရှင်ကို လှည့်ကြည့်မိလိုက်ချိန် ရင်ထဲအေးမျှစွာခံစားရသည့် မေတ္တာဓါတ်တို့နှင့်အတူ လေးစားခြင်း၊ချစ်ခင်ခြင်း၊တို့နဲ့အတူ ……….. စိတ်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရှိခိုးဦးချမိပါတယ် ဖေဖေရယ်………..။
အဖေတွေလည်း မိဘဖြစ်၍ သားသမီးကိုချစ်တတ်ပါသည်၊ ပြီးတော့ အိမ်ကမဟေသီ ဟုန်းမစ်နစ်စထရီ (အိမ်ဝန်ကြီး) ဆိုသလို ချစ်ဇနီးကိုလည်း ဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။
မိဘတွေသားသမီးအပါ်ထားတဲ့မေတ္တာက ဘယ်အရာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရပါဘူး …
အခိုင့်မှာ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သမီးလေးကိုသိပ်ချစ်ရပါတယ် …. ဒါကို အခိုင့်အမေကပြောတယ် သိပ်ပိုတယ်တဲ့ အလုပ်ကအပြန်မှာ အခိုင်ကဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲ သမီးနဲ့သာ အချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိတယ်လေ … အခိုင်ကအမေ့ကို စကားတခွန်းပြန်ပြောမိတယ် လောကမှာ ကိုယ့်သားသမီးကို မိဘလောက်ဘယ်သူကမှ မချစ်ဘူးအမေ တစ်ခြားသူတွေဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပြောပြော မိဘလောက်သည်းခံပြီး အနစ်နာခံမချစ်ဘူး လို့ ဒါကြောင့်သားသမီးတွေကိုအချစ်ဆုံးလူကနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ် အဲဒါအဖေရယ်အမေရယ်လု့ိပဲလို … မနိုရာရဲ့ပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး မိဘမေတ္တာကိုဖွင့်ဟသွားပါကြောင်း ……..
ခိုင်ခိုင်က မိဘနေရာရောက်လာပြီဆိုတော့ မိဘမေတ္တာကို ပိုပြီးနားလည်မှာပေါ့နော်
ခိုင်ခိုင်လဲ ခိုင်ခိုင့်သမီးလေးကို အရမ်းချစ်မှာပဲနော်
ခိုင်ခိုင်တို့မိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်
တစ်ခုတော့ရှိတယ် မမနိုရာ မိဘမေတ္တာကို နားလည်လာတာမှန်ပါတယ် …… ဒါပေမယ့် အခိုင့် မေမေနဲ့အခိုင်က ခံယူချင်ခြင်းမတူဘူး ……..
မိသားစုပျော်ရွင်အောင်ဆုတောင်းပေးလို့ ကျေးဇူးပါမမနိုရာ ……
အမေပြောပြဖူးတယ်။ ငယ်ငယ်က မောင်လေးကို အမေနို့တိုက်နေတုန်း အိပ်ပျော်သွားတာ ကုတင်ခေါင်းရင်းက ထွန်းထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်က တစ်ဆင့် မီးစွဲတာ အိပ်ယာကိုလောင်ရောတဲ့။ အဲဒါ အဖေ မောင်လေးကို မီးထဲကနေ အတင်းဆွဲပြီး ကယ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။
အဖေ့ကိုတောင် သတိရသွားတယ် နိုရာရယ်…
စံစား ခံစားစရာတွေရှိလာရင်တော့ သားသမီးကိုအရင်သတိရကြပါတယ်..
သားသမီးတွေကသာ..သူတို့ကိုယ့်ကို ပေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာလောက်ပြန်မပေးနိုင်ကြပါဘူး..
ဟိုက်.. လုပ်ချလိုုက်ပြန်ပြီ.. ကိုပေတို့ကတော့ .. စံနမူနာပါပဲအေ …
စမ်းရေပမာ မိဘမေတ္တာတဲ့ mamanoyar ရေ …
လူသားတိုင်းအတွက် ခဏခဏ သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့
မိဘကျေးဇူး အကြောင်း ရေးတင်ပေးစေလိုပါရဲ့ဗျာ..။
နိုရာ့ပိုစ့်လေးကို လာဖတ်ပေးကြတဲ့ ကိုခင်ခ၊ခိုင်ခိုင်၊မွန်မွန်၊ko kyeemite၊
ဦးပေ နဲ့ Gipsy တို့ကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
စကားလုံးနည်းနည်းနဲ ့ပေါ်လွင်အောင် ရေးနိုင်တာ.ကို ချီးကျူး.ပါတယ် ။ အားကျပါတယ် ..မမနိုရာရေ…
အခုလို နိုရာ့ပိုစ့်လေးကို ချီးကျူးပေးတဲ့
ကိုအလင်းဆက်ပြောသလိုပါဘဲမမနိုရာ စာလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ထိထိမိမိရေးနိုင်တယ် နော် ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်မမနိုရာ ပို့စ်လေးကိုအားပေးသွားတယ်နော် နောက်ထပ်လည်းမိဘမေတ္တာကို ရေးသားတင်ပြနိုင်ပါစေ။။
ဖေဖေ တို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေ မေတ္တာတွေကို….
စနိုးရေ အခုလိုပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဖေ့ဆီက ပိုက်ဆံ တော့ ခဏခဏ ရဖူးတယ် ဆုံးမစကားတွေ မေတ္တာ တွေတော ့ရသင့်သလောက် မရခဲ့ပါဘူး ..အဖေနဲ ့လည်း အဝေးမှာ နေ နေခဲ့ရတယ် ..အမေကတော့ ဆုံးသွားခဲ ့ပါပြီ….ကျနော့်အတွက်
တော့ မရခဲ ့ဖူးတဲ့အရာတွေ လို ့ဘဲမှတ်ယူခဲ ့ရပါတယ် ..လွန်ခဲ ့တဲ့နှစ် ၂ဝ ကျော် အချိန် အဖေ လုပ်တဲ ့သူ ပျဉ်းမနား ရေဆင်း တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာ ဖြစ်တဲ ့အချိန်တုန်းက မိသားစု စက်ဘီးလေး စီးပြီး ..ရေဆင်း ဈေးမှာ ဈေးသွားဝယ်ဖူးတယ် ..ကျနော်က..အဲ့လို စက်ဘီးရှေ ့က ဘားတန်းပေါ်မှာ ထိုင်လို ့ပေါ့..အမေက နောက်ကခုံမှာ အဖေက..နင်းတယ်…မမောမပန်း နာရီဝက်သာသာလောက် ကုန်းတတ်ကုန်းဆင်းတွေပေါ့..နင်းရှာပါတယ်…ရှေ ့မှာ အိမ်က.မွေးထားတဲ ့ခွေး က..ပြေးတယ်..ကျနော်က..ထန်းလျက်..လေးပစ်ပစ်ကျွေးနဲ ့..အင်း.အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမက..ဟင်းချက်….တူးပါလေရောလား..ဟာဟ…ပြန်ပြောင်းသတိရမိပါတယ်ဗျာ.လွမ်းမိတယ်ဗျာ…